केही दिन पहिला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल तस्बिर वास्ताविकता के ?
सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा सवार युवा युवतीको फोटो फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा भइरल भएको छ । सरकारी सवारी साधनहरुमा साधारणतया कस्ता ब्यक्तिहरु सवार हुन्छन् होला ? जो सरकारी कार्यलयको पोशाकमा हुन्छन् । यो सबैले बुझेकै बिषय हो । तर कार्यालय समयमा आवस्यक कामकाजका लागि प्रयोग हुने मोटरसाइकलमा सवारले
सरकारी पोशाक नलगाएको तस्बिर निकै भाइरल बनिरहेको छ । सामाजिक संजालमा भाइरल तस्बिर उक्त तस्बिरमा युवतीको माथिल्लो भाग अर्धन ग्न देखिन्छ । यस बिषयमा कुनै कर्मचारीले कार्यालय समयमा लगाउन मिल्ने पोशाक नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध भैरहेको छ। को थिए त उनिहरु ? यातायात ब्यावस्था विभागका अनुसार
प्रदेश–३–०२–००१ब–१४१२ नम्बरको मोटर साईकल धादिङको गल्छि गाउँपालिका को हो । गाँउपालीकाले अत्यावश्यक सामाग्री ओसार पसार( स्टोर) प्रयोजनका लागी सो मोटरसाईकल प्रयोग गदै आएको छ । सरकारी मोटरसाईकलमा सवार युवती र चालक युवा दुवै सरकारी कर्मचारी नै हुन् । उनिहरू दुवै जना भर्खरै सरकारी सेवामा गरेको र चितोल ( सरकारी कर्मचारीको
लागि दिईने संकेत नम्बर ) भर्न धादिङबाट काठमाडौं आएको खुलेको छ । उनिहरू दुवैजना गाउँपालिकाबाट स्विकृती लिएर नै काठमाडौं स्थीत निजामती किताब खानामा सरकारी संकेत नम्बर लिन आएका थिए । गल्छी गाँउपालीकाका प्रसाशकीय प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले दुवैजना गल्छि गाउँपालिका कर्मचारी भएको बताए । श्रेष्ठका अनुसार उनिहरू सरकारी सेवामा प्रवेश
गरेपछि लिनुपर्ने सरकारी संकेत नम्बर लिन काठमाडौं आएका हुन् । सरकारी सेवामा प्रवेश पछि कर्मचारीका लागि चितोल अर्थात सरकारी संकेत नम्बर आवस्यब पर्छ । श्रेष्ठले भने दुवै जना गाँउपालीकामा कार्यरत इन्जीनियर भएको बताए । गाँउपालीकाका प्रसाशकीय प्रमुख मोहन कुमार श्रष्ठले भने- “सरकारी मोटर साईकल पनि गल्छी गाँउपालीकाकै स्वामित्वमा छ ।
मोटरसाईकलमा सवार कर्मचारीले लगाएको कपडाको विषयमा प्रश्न उठेको छ । यसका आफनै मर्यादा पनि छन् । यस विषयमा सत्य तथ्य बुझ्ने काम भैरहेको छ ।”
Prevखुसिको कुरा भारतको दादागिरी तोडियो: हुलाकी सडक निर्माणमा अवरोध गर्ने भारतीय पछाडी
Nextअब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बस चलाउन दिने निर्णय